iPhone ma soo celin doonaa? Fiiri Solutions ah
Dhawaan waxaan arkay in dad badan ayaa ka cabanaya in ay iPhone ma soo celin doonaa. IPhone Qaar ka mid ah ma soo celin doonaa ka dib markii macruufka 9.0.2 update; IPhone Qaar ka mid ah aan ku soo celin doonaa, waayo, qaladaad, sida qaladka 21; IPhone Qaar ka mid ah aan ku soo celin doonaa, laakiin ku xayiran Recovery Mode, oo dadka qaar xitaa laga sheegay in Lugood ma garan karaan iPhone waa in Recovery Mode. Waxa aan soo uruuriyay macluumaad u baahan in la ogaado oo dhan u arkaan xal ah, aad ogaatid in xaaladaha kala duwan, waa in aad codsato xal oo kala duwan si ay u xaliyaan iPhone ma soo celin doonaa dhibaatooyinka. Fiiri xalka ugu habboon ee hoose sida ay xaaladdaada.
iPhone ma soo celin doonaa, ka dib markii Update
Calaamadaha: Waxa sameeyey wax walba oo loo baahan yahay update ka, ka dibna users ka codsaday in ay ku xidhmaan Lugood. Si kastaba ha ahaatee, marka dadka isticmaala ku xidhi iPhone iyo abuurtaan Lugood, waxba tarayn. On screen ee iPhone, waxaa uu wali muujinayaa xidhmaan Lugood.
Xalka: kiiskan, waxay ka dhigan tahay Lugood ma aqoonsan kartaa iPhone. Asal Waxaa jira sababo 2: Lugood ma aha nooca ugu dambeeya iyo software ammaanka (software anti-virus) oo kaliya blocks Lugood aad ka shaqeeya. Si loo xaliyo dhibaatada, hore u cusbooneysiin Lugood si aad u version ugu dambeeyay oo waxaad ka samaysaa hartay software ammaanka. Haddii ay weli ma shaqeeyaan, dami aad iPhone> koronto ee cable USB ah si aad u computer iyo abuurtaan Lugood> Ku hay badhanka Home aad iPhone hoos u dhowr ilbiriqsi ilaa aad ka aragto shaashadda Connect Lugood> Fur button Home iyo xiriiriyaan iPhone in cable USB ah. Haddii Lugood ogaadaa aad iPhone si guul ah, aad arki doonaa fariin leh in Lugood uu ka dareemo iPhone ah ee Recovery Mode. Markaas waxaad raaci kartaa degdeg ah si loo soo celiyo aad iPhone.
Error Unknown dhacaan
Calaamadaha: marka shidan galay kharash, dadka isticmaala oo keliya ka arki kartaa logo Apple ee shaashadda. Marka gelinaya iPhone galay Recovery Mode, laakiin iPhone karo in aan la soo celiyo ama updated iyo kor u yimaado oo fariin qalad 21, 9006, 3200, iwm
Xalka: marka qalad aan la garanayn waxay dhacdaa, waxa ugu horeeya ee aad u baahan tahay inaad samayso waa inuu sameeyo waxa ku cad qalad ka dhigan tahay. Tusaale ahaan, Baadi 21 ka dhigan tahay arin hardware ah. Markaas raac xal Apple siinayaa si ay u xaliyaan dhibaatada. Apple siiyey liiska khaladaad , waxaad iyaga ka soo hubin kartaa.
iPhone ma dhameysan doono celinta ka iCloud
Calaamadaha: Wax walba u muuqataa in ay ka shaqeeyeen dib markii laga iCloud soo celinta iPhone. Si kastaba ha ahaatee, weli sheegayaa in aysan dhamaatay soo celiyaa hoos Settings> iCloud> Kaydinta & kaabta. Fariinta ayaa sheegay in 'iPhone Tan waxaa hadda la soo celiyo oo si toos ah dib doonaa marka lagu sameeyo'.
Xalka: Haddii aad iPhone aanan dhameysan soo celin doonaa ka iCloud, waxa ugu horeeya ee waa in aad samayso waa in ay hubiso in -Wi Fi si sax ah ugu xiran. Next, waxaa la ogsoon yahay oo dhan waxaa jira cayayaanka ah ee iCloud in keeni kartaa in fashilka soo celinayo. Sidaas, haddii ay taasi, waxaad isku daydaa inaad mar kale la soo celiyo aad iPhone ilaa ay dhammaato.
iPhone ma soo celin doonaa ka dib jailbreak
Calaamadaha: Isku day in aad soo celin iPhone a jailbroken la Lugood, kaliya si aad u hesho fariin ah 'qalab tani ma aha xaq u dhista codsaday'.
Xalka: In la soo celiyo iPhone a jailbroken, marka hore waa in aad saaray iPhone soo galeen hab DFU (Qabo button Power iyo button Home 10 ilbiriqsi hoos, markaas ha tago ee batoonka oo ay sii qaban button guriga labaad dhawr ilaa aad Lugood ogaado aad iPhone.) In Lugood suuqa kala Kooban, riix Soo Celinta doorasho iPhone. Markii ugu soo celin Waa dhammaatay, halkii ay dib u soo celinta laga file ah oo gurmad ah, weeyna u maleeyeen in aad si aad u iPhone sida qalab cusub haddii aad rabto in aad u ciyaaro ammaan ah. Sida xogta ku hadhay gurmad Lugood ah, waxaad isku dayi kartaa Wondershare Dr.Fone ee macruufka (kabashada xogta iPhone) Macdan files oo mar kale soo dhoofsadaan in aad iPhone.
> Resource > iPhone > Solutions in dayactir iPhone ma soo celin doonaa Dhibaatooyinka